Indlela yokulawula ifu ngeChef Automate kunye neAWS
I-Chef kunye ne-AWS: Intlangano ebalulekileyo
I-Chef Zizenzekelayo njengenzuzo yongamele
Ukwandisa kumbutho wakho kunye neAWS
Umkhosi weChef shishini kunye neqela elivulekileyo
AWS I-OpsWorks ye-Chef i-Automate iyinto yokusebenzisana ngokubambisana phakathi kwe-Amazon Web Services kunye Software Boss, Inc. Oku kuthetha ukuba, zombini imibutho igxininise ekuqhubekeni kwakho nale nkqubo. Siyathokozisa iincinci kwaye sisebenze ngenkuthalo ukunikela kuwe okulungileyo kwinqanaba lethu ngalinye kuletha itafile. Uya kuhlala usebenza kanzima kunye kwaye unokuxhomekeka ekuqwalaseleni lo mnikelo uqhubeke ukhula ngenxa yokugxeka abaklayenti. Oovulindlela ababini bemakethe baye babambisana ukuqinisekisa ukuba ulungele ukuba (njengoko sithethile ukususela ekuqaleni) "lawula ifu."
At intloko, sibona umzekelo kunye nabaxhasi bethu abakhulu. Ekubeni sitshintshile imibutho yabo ngokubanceda ukukhupha ikhowudi ngokukhawuleza, ngokukhuselekile ngakumbi, kwaye ngokuthe xaxa, I-Chef i-Automate iyajika ibe yintsebenziswano yolawulo oluyisiseko. Njenganoma yimuphi ulawulo lolawulo oluyisiseko, ukuqinisekiswa kokufikeleleka kwalo kunye nolwazi lokuthembeka ludinga amandla amakhulu, ukunyanzelisa, kunye nempahla. Abaxhamli bethu be-Fortune 500 kufuneka badle umgaqo-siseko-siseko kunye nesigaba sokulawula esicelo njengongamele ulawulo.
I-AWS OpsWorks ye-Chef i-Automate inikeza inqanaba elifanayo lokusebenza, ukhuseleko, kunye nomgangatho ongaqinisekiyo we-Chef u-Automate ukuba ulindeleke ngokubanzi kunoma yiyiphi inzuzo ye-AWS. Ngokuchasene nesibini-ukuqikelela ikhwalithi engapheliyo yezixhobo zakho okanye ukusetyenziswa kwenkqubo yakho, unako ukunika I-AWS ithuba lokujongana ne-Chef Automate ngawe kunye ne-24x7x365 kwaye uhlawule ngokukhawuleza. Vumela i-AWS ibhekane nokuqiniswa kwakho, ukuvuselela kwakhona, kunye nokuqulunqwa kweprogram. Oko kukugunyazisa wena kunye neqela lakho ukuba utyalombele amandla angaphantsi ekujongeni i-Chef i-Automate kunye nexesha elongezelelweyo ukugxila ekuxabeni abachasene nabo.
AWS OpsImisebenzi ye-Chef i-Automate iyinzuzo ye-AWS yendawo. Njengawuphi na ulawulo oluyithengayo kwi-AWS, ngaba ngumrhwebi wengxelo. I-AWS inikeza ubungqina, isebenzisana nolawulo lwakho, kwaye yinjongo yakho yokuqhagamshelana nenxalenye enkulu yeengxaki zakho. I-Software ye-Chef Software Inc. yintsebenziswano ye-AWS kwaye siqinisa ukusetyenziswa kwazo kwezinto zethu. Nge-AWS OpsWorks ze-Chef I-Automate, ukwandisa ubuhlobo obusondeleyo njengokuba unayo kwi-Amazon Web Services. Nakuphi na ukusetyenziswa kwalolu lawulo kubonisa njengenkcukacha kwi-AWS yakho. Ufumana wonke amandla e-Chef, axhaswe ngumthengisi welifa uyazi kwaye uyamthemba. Inxalenye enkulu yokusetyenziswa kwe-Chef ifakwe kwisinye ngqo, esilula ukuyisebenzisa, kwaye kulula ukubona indawo. Njengolunye uhlangothi lwesiseko lwenkqubo yakho yesitoreji, yincwadana yecandelo elilodwa lokumisela ipakethi elinikezelwe ngu-AWS.
Lo mnikelo omtsha uyindlela elula kubaxhasi be-AWS ukuzama into yeChef ye shishini: Chef Automate. Ukufikelela kuma-hubs amahhala akwa-10 kunyaka owodwa, indlela ekhuselekileyo ngokubanzi ukuqala ngokukhawuleza nokuqonda indlela I-Chef i-Automate kukunika ukulungelelanisa, ukungahambisani, kunye nenkqubo yomsebenzi xa usebenza nazo zonke utshintsho kwiinkqubo zakho zesicelo. Nge-AWS OpsWorks for Chef I-Automate, nawe ulungele ukusebenzisa uninzi lwezixhobo ezivulekileyo ezifumaneka rhoqo kwi-System ye-Bif system equka i-Supermarket zokupheka iincwadi, i-test-kitchen, InSpec, iHitatat, kwaye (ngokucacileyo) I-Chef yokujongana yakho Isicwangciso se-AWS kunye nezicelo. Ufumana ithuba lokuchaphazela okusemgangathweni kwezo zombini kunye nokuqala nge-snap yokubamba.
Akukaze kube nzima okanye ngaphantsi kokufuna ukuqala ngeChef Automate; kufikeleleke kwangoku kwintuthuzelo efanayo ye-AWS njengokwamanye olawulo lwesizukulwana.